Otu nke Muslimmụnna Muslim - WRSP
Udo nke ndị MUSLIM BROTHERS
UTU NDỊ MUSLIM BROTHERS TIMELINE
1928 Hasan al-Banna guzobere Society of Muslim Brothers na Isma'iliyya, Egypt, ma weghachite ihe ndi ozo na Cairo na 1932.
1949 (January) gburu Hassan al-Banna, ndị ọrụ gọọmentị na-ekwu.
1952 mgbanwe nke ndị ọrụ Free.
1954 Ọchịchị ọhụrụ ahụ gbaghaara Society of Muslim Brothers ma kwupụta na ọ bụ nzukọ na-akwadoghị.
E gburu 1966 Muslim Brother ideologue, Sayyid Qutb, maka itinye aka na atụmatụ megide ala.
1970 Anwar Sadat weere ikike ma malite ime ka mmekọrịta ndị ọchịchị na Society nke Muslim Brother.
Ndi Jihad, ndi agha Islamist radical, bu onye isi ochichi 1981 bu Anwar Sadat.
1981-2011 Society nke Muslim Brothers ejiri rụọ ọrụ n'ime obodo nkịtị nke Ijipt ka ha kwupụta mmegide ya megide ọchịchị ụwa ma mee ka ọnọdụ ya sie ike.
2011 (Jenụwarị) Society nke Muslim Brothers sonyeere ndị mmegide n'okporo ámá na Tahrir Square nke Cairo, na-eduga na February ruo ọdịda nke President Hosni Mubarak.
2011 (April) Society of Muslim Brothers hiwere ntọala Freedom na ikpe ziri ezi iji tinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme mgbanwe.
2011-2012 Freedom and Justice Party ndi otu ndi mmadu natara otutu ndi oche n'ogo ntuli aka nzuko omeiwu.
2012 (July) Akpọrọ Onye Nwanna Ala na Nnwere Onwe na Onyeikpe na-ekpebi Muhammad Morsi ịbụ onyeisi oche nke Egypt na nhoputa ndi ochichi nke mbụ.
Society nke Muslim Brothers (nke na-esote Muslim Brotherhood) malitere mgbọrọgwụ n'Ijipt na-enwe mmetụta nke ndị eze na-akwadoghị, ndị ọchịchị mba, na ndị ọchịchị. Ọ bụ ọrụ nke otu oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na nke na-eme ka ọrụ ya rụọ ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị echiche ya, ugboro ugboro iji mee mgbanwe maka ọnọdụ ndị gbanwere agbanwe. N'ezie, akụkọ ihe mere eme na mmepe nke mmegharị yiri nke ahụ na-eme ka ndị Ijipt nwee ọganihu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị - site n'ikike nke mba na ịchịisi aka ike (na nso nso a) democratization.
Hasan al-Banna (1906-1949) guzobere Òtù Ụmụnna Muslim na 1928 na Isma'iliyya, Egypt, obodo nke e kenyere ya dị ka onye nkụzi Arabic mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji na-akụzi ego nke Cairo, Dar al-'Ulum. N'oge ahụ, Isma'iliyya, nke dị n'ofe Suez Canal, bụ ebe etiti ọchịchị ndị ọchịchị Briten n'Ijipt, na-esote ndị agha Briten na ndị nwe ụlọ ahịa Suez Canal. Al-Banna, dị ka òtù Muslim Brotherhood si kwuo, chere na a manyere ya ịnakwere ndu ndú nke nzukọ ọhụrụ a raara nyeghachi na-ewuli Islam elu ma na-asọpụrụ ndị Ijipt, ndị nke a na-ata ahụhụ n'okpuru mweda ala nke ọrụ ala ọzọ na njedebe nke ọdịnala ọdịnala ; nzụlite ya dịka onye ntorobịa na-asọpụrụ Chineke, bụ onye sonyere n'òtù okpukpe ndị na-eme ihe ike na Sufism, kwadebere ya ịrụ ọrụ a (Mitchell 1968: 1-11).
Brothertù Muslimmụnna Muslim nwere ike ịmalite na Isma'iliyya, mana ọ hụrụ ka amụrụ ya dị ka mmegharị na Cairo, ebe ọ guzobere isi ụlọ ọrụ ya na 1932. pingdegharị ngagharị ahụ egosila na ọ siri ike n'ihi na ọ were ọtụtụ ibu ọrụ, yana n'ihi na Banna, site na mbido, lere ya anya ka ewezuga ndị na-akwado ọgụ na Egypt na ụwa nke Alakụba oge ahụ: “Brethern, ị bụghị nzukọ nwere ọmịiko, ma ọ bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ otu mkpakọrịta ime obodo nwere ebumnuche siri ike. Kama ị bụ mmụọ ọhụrụ na-eme ka ọ banye n'obi nke mba a ma weghachite ya site na kor'an; ìhè ohuru na-enwu ma na-achụsasị ọchịchịrị nke ịhụ ihe onwunwe n’anya site na mmụta nke Chineke; olu na-ada ụda nke na-ebili ma na-ekwughachi ozi nke Onyeozi nke Chineke… Ọ bụrụ na mmadụ kwesịrị ịjụ gị: Kedụ ihe ga-eme ka arịrịọ gị rịọ ?, kwuo, sị: Anyị na-akpọ gị oku nye Islam, nke Muhammad wetara gị: gọọmentị bụ akụkụ nke ya, na nnwere onwe bụ otu n'ime ọrụ okpukpe ya. Ọ bụrụ na mmadụ ga-asị gị: Nke a bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị !, kwuo: Nke a bụ Islam, anyị anaghịkwa amata nkewa dị otú ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ ga-asị gị: You bụ ndị nnọchite nke mgbanwe !, kwuo: Anyị bụ ndị ọrụ nke eziokwu na udo nke anyị kwenyere na nke anyị buliri elu. Ọ bụrụ na ị bilie imegide anyị ma nye ihe mgbochi nye ozi anyị, Chineke enyela anyị ikike iji chebe onwe anyị, ị ga-abụkwa ndị nnupụisi na-ezighị ezi ”(al-Banna 1978: 36).
Maka al-Banna, ozi nke Òtù Ụmụnna na-egbochi mkpa mmadụ, ihe onwunwe na nke mmụọ. Ọ bụ ozi siri ike n'okwukwe, n'ikike nke Islam iji dozie ihe ịma aka ụwa na-eche ndị Ijipt na ndị Alakụba niile nsogbu. Ọ bụkwa ozi, dị ka al-Banna ghọtara, na-asọ mpi na "ọrụ" ndị ọzọ (ya bụ, ideological systems) nke ụdị ego dị iche iche nke dị na West ma mee ka ọ dị n'ime obodo Muslim.
Na 1930s na 1940s, Òtù Ụmụnna Muslim gbakọrọ aka megide otu òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị na òtù, ọtụtụ n'ime ha nwere ụdị mba nke gosipụtara ụkpụrụ Europe nke ụlọ mba, gụnyere ịrịọ arịrịọ (Islam) iji gosipụta ọdịbendị omenala na ime ka ịdị n'otu . Otú ọ dị, Òtù Ụmụnna enweghị afọ ojuju n'echiche nke okpukpe dị ka omenala nke na-akọwa ọdịdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị ọchịchị, n'ihi na ọ kwenyere na Islam na-enye usoro usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta dị mma - nkwupụta nke dị na Islam Islam ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị . (Fuller 2003: xi) Ya mere, dịka otu mmegharị, mgbe ahụ, Òtù Ụmụnna Muslim gosipụtara onwe ya na megide nkwupụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke meworo ka ndị mmadụ dịrị ugbu a, dị ka ịhụ mba n'anya na ịhụ mba n'anya, tinyere akụnụba ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị isi oge a, dị ka socialism, ọchịchị Kọmunist, na ịgba ọchịchịrị. Ihe omuma a nile di na nchoputa al-Banna, enweghi ezi nke ndi Islam, ya mere ndi ndi ochichi choro ime ka ha nwekwuo uzo. Ma, ọ bụghị nanị imezi echiche nke al-Banna na Òtù Ụmụnna jụrụ; ha na-eme mkpesa megide usoro ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Ijipt nke nyeworo ndị otu ọkwá mara ọkwa nke na-achị ndị mmadụ ike (Lia 1998: isi nke 7).
Òtù Ụmụnna Na-ahụ Maka Ala mere ka onwe ya mara onwe ya ọ bụghị naanị na nghọta ya banyere njirimara nke oge a kamakwa n'ụzọ ọ na-emetụta mmetụta uche ọha na eze na-emeri obi na uche. N'adịghị ka mmegharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ, Òtù Ụmụnna guzobere ọtụtụ ọdịmma, mbipụta, na achụmnta ego: ọ na-edebe ụlọ ọgwụ ike; kesaa nri na uwe; enyere ụmụ akwụkwọ aka na nduzi ọmụmụ, ihe oriri, na njem; akwụkwọ ndị e bipụtara, akwụkwọ nta, na magazin; guzobe ulo oru ma nyere aka nye ndi otu oru. Ihe omume ndị a gosipụtara ntinye aka nke Òtù Ụmụnna iji nye onyinye bara uru ná ndụ nke mba ahụ, na igosipụta ihe Islam, nke a ghọtara nke ọma ma guzobere, nwere ike ịrụzu. N'ebe a, òtù òtù Ụmụnna na-agafe karịa ndị na-eme mgbanwe bụ Jamal al-Din al-Afghani na Muhammad 'Abduh, ndị nwere ọgụgụ isi nke Islamism, ndị gosipụtara nkwenye nke Islam na nke oge a site n'okwu na ederede. Ihe ịga nke ọma nke ọhụụ nke Òtù Ụmụnna nwere ike tụọ, ma ọ dịkarịa ala akụkụ ya, nke ndị nsonye-1940 na-eme atụmatụ na 500,00, ọ bụghị gụnyere ndị nwere mgbakọ (Mitchell 1969: 328). Ọ bụ isi ihe na-ewu ewu nke òtù ahụ mere ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ nye ndị ọrụ Free na-eduzi mgbanwe 1952 n'Ijipt, na-akwatu ọchịchị eze ma na-eguzobe otu mba nke oge a.
Tupu ọgba aghara ahụ, òtù ndị Alakụba Muslim abuanawo n'ọtụtụ agha na steeti, nke kachasị njọ bụ mgbu mmadu ahụ, na December 1948, nke praịm minista Nuqrashi Pasha n'oge ahụ. Mkpesa nke ọha na eze gbakwunyere anya n'ihu ọha, ma nke ọma ma dị njọ. Na February 1949, al-Banna gburu, n'ihe ọtụtụ ndị na-ekiri na-ele anya dị ka mmeghachi omume nke ọchịchị. Ọ bụ ezie na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba ndị Ijipt nwere ike mgbe ụfọdụ ọbara ọbara, oge a na-egosi mmalite nke Òtù Ụmụnna Muslim (na 1920s) na mgbanwe 1952 ka a na-akpọ "nnwere onwe nnwere onwe," n'ihi na ọ bụ oge arụmụka na-enweghị isi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọrụ. Na mgbanwe ahụ, nnwale ahụ bịara ná njedebe, na mpaghara ọhụrụ nke mba
amata na nzube malitere. Ndị agha site na ọzụzụ, ndị ọrụ na-ahụ maka onwe ha nwere mmekọrịta chiri anya na Òtù Ụmụnna Muslim, ma ha ghọtara na ọ bara uru itinye aka na otu ihe dị mkpa nke nkwado nkwado na agbụrụ. Mgbe a gbasasịrị ikpe ahụ, e nyere iwu iwuchibido ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otú ọ dị, Òtù Ụmụnna Alakụba, bụ nke mbụ, kwere ka ọ nọgide na-arụ ọrụ, n'okpuru nkwenkwe na òtù ahụ nwere usoro okpukpe. Mgbalị ndị a na-eme iji rafuo Òtù Ụmụnna ahụ iji kwadoo ọchịchị ọhụrụ ahụ dara ada, na mmebi mgbagwoju anya mere, na 1954, mgbe nwatakịrị Muslim nọ na-etinye aka na mkpochapụ nke Gamal Abdul Nasser, onye na-edu ndú n'etiti ndị ọrụ Free na onyeisi oche mbụ nke Ijipt.
Ndị ikpe ikpe maka ọnwụnwa ikpe ọnwụ ahụ mara ikpe ọnwụ ma ọ bụ ụlọ mkpọrọ. Ọtụtụ narị mmadụ merụrụ n'ụlọ mkpọrọ, a kpọkwara Òtù Ụmụnna Muslim dịka nzukọ na-akwadoghị. A na-ata ndị òtù ya ahụhụ n'ụlọ mkpọrọ ma na-amagharị n'okporo ámá. Ihe mgbaba ahụ kwụsịrị n'oge Nasser, 1952-1970, mgbe ndị ọchịchị na-ahụ maka mmepe mmepe mmekọrịta na ndị ọchịchị na-achịkwa ọchịchị. Oge ụlọ mkpọrọ ahụ bụ oge maka Ụmụnna ka ha na-arụ ụka ụka Islam pụtara ma kwụsị. (Kepel 2003: isi nke 2) Nye ọtụtụ, n'okpuru nduzi nke Hasan al-Hudaybi, onye ketara uwe nke General Guide of the Muslim Brotherhood mgbe ọnwụ nke al-Banna, ihe kachasị mma bụ ịga n'ihu bụ ilekwasị anya na ikwusa ozi ọma, nkuzi, na ihe ọ bụla omume ọha na eze na-eme. ikike. Egburu Hudaybi ọnwụ na 1954, ọ bụ ezie na e mesịrị kpaa ikpe ya gaa n'ụlọ mkpọrọ. Mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ, o dere Duah ... ihe mere (Ndị nkwusa abụghị ndị ikpe), nke ọ rụrụ ụka maka imeru ihe n'ókè na imegide usoro aghụghọ. Maka ndị Islamist ndị ọzọ, ọchịchị obi ọjọọ nke ọchịchị Nasser, aghụghọ, na amụma ndị Alakụba chọrọ azịza agha - jihad ma ọ bụ agha dị nsọ bụ azịza ya. Sayyid Qutb, onye okwu echiche nke Brothertù servingmụnna nwoke nọ na mkpọrọ afọ iri na ise, kọwapụtara ikpe maka ime ihe ike nke mba ụwa na ime ihe ike Chineke kpebiri na akwụkwọ ya a ma ama ugbu a Ma'alim fi'l-tariq (Ihe ngosi na okporo ụzọ, mgbe ụfọdụ a sụgharịrị dịka Ihe omimi). Qutb dị ka onye na-enweghị atụ, na-amalite ya dị ka onye edemede na-agụ akwụkwọ yana inweta aha ọma dị ka onye nyere echiche ọgụgụ isi maka echiche Islamist. Mgbanwe ya - site na ndị agha rue na-enweghị atụ - na-ekwu maka njikọ dị n'etiti ọchịchị aka ike na ịkọwapụta n'Ijipt na ebe ndị ọzọ na Islam ụwa. N'ịbụ onye a tọhapụrụ n'ụlọ mkpọrọ, n'oge na-adịghị anya, ọ laghachiri mgbe ọ chọtara nrọ Islamist megide ọchịchị ahụ; a nwara ya ma gbuo ya na 1966. Hudaybi na Qutb bịara gosipụta ụzọ dịgasị iche iche nke Islamism siri ike na agha, ọ bụ ezie na ihe mgbaru ọsọ ha nọgidere bụrụ otu ihe ahụ: nchịkọta nke ala Alakụba nke na-akwado iwu Islam.
Ngwọta nke Ụmụnna ahụ gbanwere n'ụzọ dị ịrịba ama mgbe Nasser nwụsịrị na 1970 na nnyefe nke Anwar Sadat n'isi oche. Sadat, otu n'ime ndị isi ndị isi ọrụ Free Officer, wepụtara ọtụtụ ndị Alakụba si n'ụlọ mkpọrọ ma mee ka Òtù Ụmụnna maliteghachi ọrụ mgbalị ya, na-ekwenye na nzukọ ahụ anaghị etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ịkatọ ndị agha Islamist. Ma e nwere ọtụtụ ihe agha na-eme iji katọọ. N'ime 1970s, otu ìgwè nke ndị Islamist onwe ha nwere onwe ha na-agba akaebe ma ọ bụ n'ụzọ akaghị aka na steeti nke steeti ma tụgharịa na ime ihe ike. Dị ka okwu ya, Òtù Ụmụnna ahụ kwusara megide ime ihe ike, ma ọ kwadoro òtù ndị Islamist ahụ bụ ndị gosipụtara ọchịchị ahụ ma jụọ ndị Alakụba na ndị isi na-eduzi ya. Ihe ngosi gosiputara dika ndi Alakụba na-etinyere nkwenye nke Sadat na mmetụta ha na ndi Ijipt. Na mpaghara akụ na ụba na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Sadat agbanyela ihe omume na Nasser na agbụrụ ndị ọchịchị ma nakweere Soviet Union, na-agafe n'ahịa ahịa ego (iwu "ọnụ ụzọ emeghe" na ọbụbụenyi na United States. Mmetụta nke ngwongwo na itinye ego na-emepụta onye ọhụụ ọhụrụ ma dugara nchegbu gbasara enweghị nkesa nke akụ na ụba na nrụrụ aka nke metụtara nkwekọrịta obodo. Ọhụụ ọhụrụ nke Sadat na-eme ka ụwa ndị ọzọ pụta ìhè gosiri na nrụrụ aka nke ndị Alakụba na-adịghị anabata, dịka oriri abalị, casinos, ịṅụ mmanya, na ịgba akwụna. Mkpesa nke Islamist bịara buru ibu mgbe Sadat bịanyere aka na Ogige David Accords na nkwekọrịta udo udo nke sooro Israel-mgbanwe iwu nke mba ọzọ mere ka ọtụtụ ndị Ijipt gbagwojuanya bụ ndị e kpughere na-emegide Zionist, mgbasa ozi megidere nke Israel na ụlọ ọrụ ndị nwe obodo ruo ọtụtụ iri afọ .
Site na njedebe 1970, Òtù Ụmụnna Muslim, n'agbanyeghị nkwekọrịta tacit ya na Sadat, malitere ịmalite ọrụ na
mkpesa megide ọchịchị. Ma ọ bụghị nanị ndị Islamists ndị na-enwe nkụda mmụọ na mmepe na Egypt; Ndị Kraịst (Copts), ndị na-ekwurịta okwu, ndị nta akụkọ, na òtù azụmahịa na-ekwupụta iwe ha. Site na 1981, Sadat hụrụ onwe ya na ndị iro ya na-agafe n'usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ na-azaghachi site n'ịchịkọta ndị isi n'etiti ndị mmegide ahụ. Olee otú Sadat bu n'obi iji dozie esemokwu ndị a wee ghọọ ọkpụkpụ na October 1981, mgbe ndị òtù okpukpe Islamist kpọrọ Jihad gburu Sadat ka ọ na-enyocha ndị agha Ijipt n'oge ememme mba. Onye na-anọchi ya, Hosni Mubarak, nọ ọdụ n'otu nyocha ahụ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na, ọ bụ ezie na Sadat nyeere òtù Òtù Ụmụnna ohere iji rụọ ọrụ na obodo nta nke Ijipt, ọ dịghị emebi iwu nke kwupụtara nzukọ ahụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị. N'ụzọ dị otú a, onyeisi oche nwere ike igbochi Ụmụnna na-achọ, mgbe ọ bụla ọ dị ka ọ ga-agafe karịa ókèala. N'eziokwu, Sadat nọgidere na-ejikwa ikike aka ya eme ihe dị ka onye bu ya ụzọ, ọ dịkwa njikere ịhapụ ndị nkatọ ya ma ọ bụrụ mkpa ahụ. Hosni Mubarak nọgidere na-agbaso usoro iwu a nke na-emeso Òtù Ụmụnna, ma ya onwe ya kwa, dị ka onye bu ya ụzọ, hụrụ onwe ya na mkparịta ụka ahụ dịka ọ na-eche ya ihu. N'ezie, mmekọrịta dị n'etiti ala Ijipt na òtù Ụmụnna amalitela, n'oge na-aga, n'otu oge nke esemokwu na imekọ ihe ọnụ. Ọ bụ mmekọrita nke na-ekwenye na ọ dị ha abụọ mkpa ka ha wee dịrị ndụ na obodo ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Ijipt.
Sadat na onye nọchiri ya, Mubarak enweghị ebum n'uche imepe usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị, iji mee ka onye kwuo uche ya kwenye, n'agbanyeghị nkwupụta okwu ndị megidere ya. Enweghị nkwado ndị na-ewu ewu na-abịa site na ntuli aka, steeti dabere na ikike nke ụlọ ọrụ mmekọrịta - ụfọdụ gọọmentị metụtara, ụfọdụ adịghị - inye ya nkwado ziri ezi na ndị mmadụ. Kemgbe oge Nasser, ala Ijipt na-elegarakarị Al-Azhar, ebe etiti mmụta Alakụba na Egypt (ma ama na ụwa Alakụba), iji nye nkwado okpukpe maka mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mana al-Azhar chọpụtara na aha ya mebiri ka ọ ghọrọ olu nke steeti, echiche nke hoodtù itselfmụnna n'onwe ya nyere aka ịzụlite n'ihi na ọ kwenyeghị al-Azhar banyere Islam na ọrụ kwesịrị ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ijipt. Ọganihu ndị Islamist dị iche iche (ime ihe ike na nke na-emeghị eme) bido na 1970s, okpukpe na-arịwanye elu nke ọha mmadụ na Ijipt, yana ọrụ ịbịakwute nke Brothertù hoodmụnna, nyere ndị na-eme njem okpukpe ka ndị mmadụ nwee nsogbu na, site na mgbakwunye, steeti. Tù hoodtù lemụnna kwadoro ọnọdụ ya vis-à-vis steeti “na-eche na ndị isi obodo bụ ndị modernist na agwa ma na ha enweghị ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na echiche ha na-anọchi anya ọnọdụ mgbanwe nke ndị na-etiti, na-eme ka ndị Alakụba na-emebiga ihe ókè. ”(Auda 1994: 393). Itstù hoodtù ,mụnna, otu òtù na-akwadoghị iwu dabere na ohere nke steeti ịga n'ihu ọrụ ya. Tù hoodmụnna ahụ amatawo na ọ dịghị mkpa maka ike steeti na ngwa ya nke ime ihe ike. Nanị usoro ọzọ bụ ibi na mpaghara iwu akwadoro na ịkwanye ókèala ahụ oke otu enwere ike. Mmekọrịta dị n'etiti Brothermụnna na steeti nọgidere na-esemokwu na esemokwu, n'ihi na akụkụ abụọ ahụ ghọtara adịghị ike nke onye nke ọzọ, ghọta oke nke ha, ma na-atụsi anya iwepu nke ọzọ na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe si na ya pụta bụ, dị ka otu onye na-ahụ anya kwuru, "usoro nhazi" nke gbanyere mkpọrọgwụ nke "esemokwu, nkwenye, na imekọ ihe ọnụ" (Auda 1994: 35).
Ọnọdụ a nọgidere na-aga n'ihu n'ọchịchị Mubarak, 1981-2011, ruo mgbe mmiri mmiri nke Arab na-akwusi ọnọdụ ahụ. Na January, 2011, mgbe ndị mmegide malitere weere n'okporo ámá dị na Cairo, isi obodo Egypt, òtù Ụmụnna Muslim nọgidere na-aga n'ihu, na-egbochi ịnwefu ihe onwunwe ya ma nwekwaa nnwere onwe ọrụ n'ime ihe gbasara ọgba aghara ọchịchị. Ozugbo ike mgbanwe nke mmegide n'okporo ụzọ bịara doo anya, Òtù Ụmụnna sonyeere mkpesa ndị ahụ ike, na-enye ndị isi na nzukọ. Ọtụtụ ndị na-enwe obi ụtọ nke ndị mbụ, ndị ndú ụwa nke ọgba aghara ahụ, Òtù Ụmụnna gosipụtara na ha nọ na seminarị agha megide Mubarak. Ka ọ na-erule February, 2011, a manyere Mubarak site n'ọfịs na ọchịchị ndị agha na-etiti oge, nke Kansụl Kasị Elu nke Ngalaba Ndị Agha (SCAF), nyere ike, na-ekwe nkwa inwe ntuli aka nụ. Ọnwa abụọ mgbe nke a gasịrị, Òtù Ụmụnna Muslim malitere ntọala Freedom na ikpe ziri ezi (FJP) iji mpi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ nke Ijipt. Dịka ọtụtụ ndị na-akọwa si kwuo, ọhụụ nhazi na nlekọta nke òtù Òtù Ụmụnna gbanwere n'ime ntuli aka nke ntuli aka: mgbe ọtụtụ nnọkọ ntuli aka nke nzuko omeiwu gasịrị, njikọ FJP pụtara na gburugburu 45% nke oche; na June, 2012, onye FJP, Muhammad Morsi, ghọrọ onyeisi ndị mbụ a họpụtara ahọpụta na Egypt. Tupu ya amalite ọrụ, Morsi hapụrụ kpamkpam site na Òtù Ụmụnna Muslim na FJP, na-ekwu na ọ gbara mbọ ịnọchite anya ndị Ijipt niile. Ọ ka na-ekwurịta okwu, n'ihu ọha na n'azụ ihe nkiri ahụ, na SCAF maka ókè ọchịchị ike ndị ọchịchị na-esote na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'Ijipt, ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
A katọrọ Brothertù Muslimmụnna Muslim mgbe ọ bụla maka ịbụ ma ọ bụ na-akpa àgwà dị ka ndị Kharijites, otu òtù ịrọ òtù agha nke pụtara na 7 nke narị afọ nke asaa ma bụrụ ndị a katọrọ na isi mmalite. Ebubo a pụtara na nnabata ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mkparịta ụka ọha na eze banyere Islamism, nke na-egosi na ọ dị oke mma, ma na-egosipụta usoro mgbasa ozi nke etinyela ọdịnala ndị Alakụba n'okwu nke oge a (Kenney 2006). N'echiche siri ike, hoodtù heldmụnna na-ejidesi nkwenkwe ozizi ndị metụtara ọdịnala Sunni Islam. Mana echiche ngagharị ahụ gafere ihe ndị dị mkpa a na-ahụkarị n'okwukwe, ihe a na-akpọ "ogidi ise" nke Alakụba. Thetù hoodmụnna gbanwere ozizi na omume n'ime echiche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụ ezie na ọ na-ekwu na mgbanwe a na-agbaso usoro nke Onye Amụma Muhammad na Caliphs Kwesịrị Ekwesị (ndị isi anọ mbụ mgbe ọnwụ Muhammad na Sunni Islam) gasịrị. "Onye kwere ekwe," dị ka al-Banna si kwuo, bụ "onye ọ bụla nwere okwukwe na ozi anyị, kwenyere n'ihe anyị na-ekwu, kwado ụkpụrụ anyị, ma hụ n'ime ya ụfọdụ ihe ọma nke mkpụrụ obi ya nwere ike iju afọ" 1978 (11): XNUMX). Otu a ka thetù gavemụnna si chee na ịbụ onye Alakụba pụtara ịnakwere echiche ụwa na-enye echiche ụwa maka echiche a - aro nke were iwe ọtụtụ ndị Ijipt chere na ndị otu ahụ na-ebo ha ebubo na okwukwe ha ezughi ezu.
Ejikọtara echiche / nkuzi nke òtù tomụnna na ịgụ ya banyere ahụmịhe nke oge a nke ndị Alakụba, na nloghachi nke akụkọ ihe mere eme nke ọrụ mba ọzọ, enweghị mmepe, na okwukwe na-adịghị ike gosipụtara. Nzaghachi nye ọnọdụ a bụ nkwuputa ikike nke Islam, dị ka usoro zuru ezu, iji nye ndị Alakụba ezigbo ngwọta ụwa, nkwupụta nke ghọrọ ọkọlọtọ maka Brothersmụnna na-agba ọsọ na ntuli aka ndị omeiwu site na 1980s na: "Islam bụ ihe ngwọta . ” Nkwenye na Islam, mgbe ahụ, bụ mmalite nke nkuzi nkuzi nke hoodmụnna, mana ọ bụ Alakụba na, dị ka al-Banna tinye ya na otu n'ime traktị ya, mezuru ọtụtụ mkpa nke "mba renascent": olileanya, ịdị ukwuu nke mba , ndị agha, ahụike ọha na eze, sayensị, omume, akụnụba, ikike pere mpe, yana mmekọrịta na West (al-Banna 1978: 107-22). Ọdịnaya nke Islam azịza bi na ejima nsọ isi mmalite nke ọdịnala - kor'an na sunna (okwu na omume nke amuma Muhammad na ndị mbụ ibe) - ma al-Banna hotara mgbe dị ka ihe àmà ederede nke Islam ndakọrịta. ya na ihe banyere ochichi, nhazi obodo, na mmepe obodo. Ọnọdụ nkwenkwe izizi nke Brothermụnna, na ndị Alakụba n'ozuzu ha, bụ, iwu Alakụba, ọ ka dị (ikpe): ndi Ala Islam adighi adighi ya, o bu oru nke ala ala islam iji mezuo ya. Enweghị iwu Islam n'ọnọdụ, dị ka Òtù Ụmụnna si kwuo, Muslim agaghị enwe ike ibi ndu Islam n'ezie.
Ndị na-akatọ Òtù Ụmụnna na-ebo ya ebubo mgbe mgbe na ọ na-enyefe amaokwu ndị na-edoghị anya nke Koran iji dozie nsogbu dị iche iche na ihe ndị e dere ede na ebe iwu doro anya. Ma, ọ bụ kpọmkwem njedebe nke ozizi Nwanna nwoke nke jerela ya ozi ọma dịka mmegharị ahụ gbanwere n'ọnọdụ ọnọdụ gbanwere. Dịka ọmụmaatụ, Al-Banna jụrụ akụnụba akụ na ụba, ịdị n'otu nke Arab, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma òtù ụmụnna mesịrị mechie echiche ndị a (Aly na Wenner 1982). Nke a nwere ike iyi ka ekwesighi ekwenye, ma mmeghari na-eme ka ha dị mkpa na ọnọdụ ndị na-adịghị mma site n'ịgbanwe ọdịiche, na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Egypt ejiriwo ya bụrụ ihe efu. Okwesiri iburu n'uche na, mgbe mmezu nke iwu islam esiri n'onu umuaka na-acho mgbe nile, echiche di iche n'ime nzuko di iche iche mgbe nile di iche na ihe iwu Islam ga-adi ka mgbe emejuputara ya. Maka ụfọdụ, ọ pụtara usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emeghe, na nnwere onwe ikpe na nlekọta, nke na-eme ihe ndị mmadụ chọrọ; maka ndị ọzọ, ọ pụtara na ndị isi ga-achọ ndụmọdụ nke ndị ọkachamara okpukpe; na maka ndị ọzọ, ọ chọrọ usoro zuru ezu nke iwu usoro ego ugbu a. Uzo a nwere ike imebi ndi nkpu (na ufodu umu nwanne), ma obu ihe mere eme ka ogbako agwa ndi mmadu di iche iche na iwe iwe dika ihe ndi gbara ya gburugburu.
Òtù Ụmụnna Muslim na-agbasochi omenala ọdịnala nke ọdịnala: ekpere, ibu ọnụ (n'oge ọnwa Ramadan), inye onyinye, na njem njem na Mecca. O choro idebe ememe ndi a iji nweta uzo nke ato nke ndi otu, nke "member" (Mitchell 1969: 183). Ebumnuche nke onwe ya, dịka otu mmegharị, bu n'obi iji mepụta echiche nke ịdị n'otu na nzube n'etiti ndị òtù. Ihe omume ndị a gụnyere iyi iguzosi ike n'ihe, nye ma ọ bụ n'onye dị elu ma ọ bụ na otu ìgwè; nchịkọta ọnụ ọgụgụ, ebe a na-enye ndị ọha na eze okwu; na, ruo oge dị mkpirikpi, nche abalị nke al-Banna duziri maka "ndị agha" pụrụ iche, n'oge ọ ga-ekwusa ozi ọma n'ọtụtụ isiokwu. Egwuregwu na okwu ndị e ji okpukpe kpọrọ ihe bụ ebe a na-emekarị na mgbakọ Ụmụnna (Mitchell 1969: 188-97). Òtù Ụmụnna ahụ guzobere ọtụtụ ụlọ alakụba, na mgbe ụfọdụ, a na-eji ụlọ alakụba ndị ọzọ eme ihe maka ebumnuche, ma ọ dịghị òtù okpukpe nke òtù Ụmụnna na-etinye aka n'ebe ahụ.
Nnwere onwe nke òtù Ụmụnna Muslim bụ nke lanarị na ihe ịga nke ọma zuru ezu na-adabere na nzukọ na ịdọ aka ná ntị ya. N'elu nzukọ a bụ General Guide, bụ onye na-elekọta ma ọ bụ General Guidance Council (GGC) na Ụlọ Ọrụ Na-atụ aro (CA). Dika Onye isi nduzi mbu, al-Banna setịpụrụ ụkpụrụ dị elu maka ịgba akwụna, charisma, na ịdị umeala n'obi. Ndị òtù ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu, ndị na-ekwenyeghị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Islamist na-akwanyere ya ùgwù. GGC bụ ọrụ maka ịkpụzi na imezu iwu. Ca dị iche iche sitere na alaka dị iche iche gburugburu obodo ahụ na ọrụ dịka ndị na-eme ka ha nụ olu ha n'ime ndu. N'agbanyeghị na GGC na CA dị mkpa, ọ bụ al-Banna, n'ihi àgwà na mmetụta ya dị ukwuu, bụ ndị setịpụrụ usoro na ụdị nke ọrụ Ụmụnna. Nchịkọta nke ụbọchị ọ bụla bụ "Ngalaba" nke na-elekọta ihe metụtara nkwenkwe / ọzụzụ, na "Kọmitii" nke na-eche banyere ego, iwu, ọrụ, na nsogbu iwu. Ntuziaka site na General Guide ma ọ bụ kọmitii na-edu ndú / mpaghara na-agafe "ngwa ngwa" ndị a haziri ahazi dịka "district," "alaka," na "ezinụlọ" (Mitchell 1969: 164-80). Ihe ndi anatara site na ndi otu soro n'oru umuaka.
Ndị òtù sonyere nzukọ ahụ mgbe oge nkeji oge ha gosipụtara ike ha imezu ọrụ a chọrọ. Na mmalite nke mmegharị ahụ, ọrụ ndị a gụnyere "ọzụzụ anụ ahụ, ihe ọmụmụ nke Koran, na mmezu nke ọrụ ndị Islam dị ka pilgrimages, ibu ọnụ, na onyinye nye ego zakat" (Mitchell 1969: 183). Ndị òtù na-aṅụkwa iyi nke na-edozi ntinye ha n'aka Òtù Ụmụnna, nke ahụ na-achọ ha "ịrapagidesi ike na ozi nke Muslim Brother, iji gbalịsie ike n'aha ya, ibi ndụ kwekọrọ n'ọnọdụ ndị òtù ya, ka ha nwee ike obi ike na nduzi ya na irube isi kpamkpam, n'ọnọdụ niile "(Mitchell 1969: 165). Ọrụ ịdọ aka ná ntị Ụmụnna ndị na-adabereghị iyi ahụ ruru ndị isi ụlọ ọrụ. Na Nwanna ahụ na-ewe ntaramahụhụ nke ndị otu na-apụta ìhè mgbe January, 2011 gbanwee. Òtù Òtù Na-ahụ Maka Ụmụnna, FJP, kwupụtara na ọ gaghị agba ọsọ maka onye ọkwá maka ọkwá onyeisi oche, mana onye otu Òtù Ụmụnna kpebiri ịgba ọsọ maka ọfịs dịka nwa akwukwo nọọrọ onwe ya. Akwụsịre nwoke ahụ ozugbo.
Ọ bụ ezie na ọrụ ndị dị n'Ijipt dịla ogologo oge nke Òtù Ụmụnna Muslim, òtù mmekọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị na North Africa, Middle East, na ọbụna na Europe. Na Tunisia, ebe mmiri mmiri malitere, òtù Muslim Brother-inspired al-Nahda ma ọ bụ Renaissance Party dị ndụ ruo ọtụtụ iri afọ nke nchịkwa gọọmenti iji merie ọtụtụ oche nọ na Mgbakọ Ọgbakọ (October 2011). Na Jordan, ndị eze oge ochie na ndị eze mbụ nwere mmekọrịta dị egwu na Òtù Ụmụnna: mgbe ụfọdụ, nzukọ ahụ etinyela aka na nhoputa ndi omeiwu nke nzuko omeiwu ma merie; ndi ochichi achoghi ichota ndi mmadu mgbe ozi ya na ihe ndi ozo choro ochichi ndi ochichi. Òtù Ụmụnna ndị Alakụba ejiriwo rụọ ọrụ na Syria ebe ọ bụ na 1940s, na akụkọ ihe mere eme ya dị ka ihe na ahụmahụ nke nzukọ ahụ dị n'Ijipt. Ndị ọchịchị Assad na-egosi enweghị ndidi maka mmegide siri ike na obere ndidi maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma Òtù Ụmụnna enwewo ike ịlanarị ma na-ekere òkè ugbu a na ọgba aghara zuru ebe nile nke na-eyi ọchịchị Bashar Assad (Talhamy 2012) egwu. Òtù Ụmụnna Muslim nke dị na Sudan kwadoro ọrụ ya site na National Islam Front, nke onye Islamist thinker Hassan al-Turabi dugara ruo oge ụfọdụ. Gọọmenti na-aga nke ọma na Sudan nwere mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Islamist, gụnyere iwu iwu nke Islam, na-eme ka esemokwu dị n'etiti mba Muslim dị n'ebe ugwu na Christian na animist n'ebe ndịda.
Òtù Ụmụnna Na-ahụ Maka Ụmụnna si n'aka ụmụ akwụkwọ na ndị kwabatara na Europe. Na England na France, obodo Muslim na-egosipụta otu ụdị àgwà dịgasị iche iche banyere Islamists dịka mmadụ nwere ike ịchọta n'ụwa nke Islam. Òtù ndị òtù òtù òtù ụmụnna na Òtù Ụmụnna ndị nwere ọmịiko na mba ndị a egosipụtawo ụda ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-adabaghị adaba, ọtụtụ ihe nhụsianya nke ndị agha Muslim bụ ndị na-akwado ụwa jihad (Leiken na Brooke 2007: 117-120). A na-ebo òtù Muslim dị iche iche na United States ebubo na ha na-aga n'ihu maka Òtù Ụmụnna Muslim, ma ebubo ndị dị otú ahụ na-abụkarị akụkụ nkwenkwe nke sara mbara banyere Islam na "ọdịdị" ya. Maka ụfọdụ ndị na-ekpuchi onwe ha "ndị nlekọta Muslim," ma ọ bụ na Europe ma ọ bụ United States, nkwupụta ọ bụla nke ndị Alakụba ma ọ bụ ịjụ ajụjụ banyere ndị Alakụba nke mba ndị mba ọzọ na mba ndị Alakụba na-egosi ihe dị iche n'etiti ndị Alakụba. Na Agha Nzuzu, mgbe post-9 / 11, egwu na nrubeisi nke ndị Alakụba na Islam aghọwo akụkụ nke ọdịbendị nke Ebe Ọdịda Anyanwụ. Ọchịchị Ụmụnna Muslim nke akụkọ ntụrụndụ nke otu puku afọ na mmegide nke ndị ọchịchị ụwa mere ka ọ bụrụ ihe na-adaba adaba na egwu egwu n'Ebe Ọdịda Anyanwụ.
Òtù òtù mmekọ na alaka nke Òtù Ụmụnna Muslim na-ekerịta echiche dị iche iche banyere mkpa ọ dị ịtụghaghachi Islam ma mejuputa ụkpụrụ nke Islamist, ma ha enweghị njikọ dịgasị iche iche. N'okwu nke ọ bụla, ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba na mbipụta kpebisiri ike otú e si eme ka echiche Islamist pụta ìhè ma mee ya. Ndị isi na mba dị iche iche, na ndị dị iche iche n'otu mba ahụ, na-echebe ikike nke onwe ha na nnwere onwe ha (Leiken na Brooke 2007: 115-117).
Ihe omuma ndi gbara gburugburu mmiri mmiri nke Arab emewo ka ndi mmadu gbanwee usoro ochichi obodo n'Ijipt. Òtù Ụmụnna ejiriwo obi ike na-agbanwe, bụ atụmanya puku afọ iji nweta ọnọdụ mgbanwe (Kenney 2012), ma ọ dịtụbeghị mgbe ọ na-eme ya site na ọnọdụ dị ike na ikike dị otú ahụ maka imetụta ndị Ijipt. Enweela ike na ike nke nzukọ ahụ na ntuli aka nsonaazụ na-esochi ọgba aghara ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọdịnala ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ijipt na-anọgide na nwata, na ikekwe ule kasịnụ nke Òtù Ụmụnna bụ ma ọ nwere ike inye aka na mmechi ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba ahụ. Òtù Ụmụnna nwere ike ịgbanwe site na mmegide mmegide na-eme ka ndị omempụ bụrụ isi? Ọ nwere ike ime mgbanwe a mgbe ọ nọgidere bụrụ onye Islamist na enyere aka idozi nsogbu akụ na ụba nke Ijipt?
Ọhụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na gburugburu ebe obibi ga-achọ ka ndị ọzọ na-emeghe n'aka nke Òtù Ụmụnna, a nzuzo na ndị na-enweghị ntụkwasị obi na-arụ ọrụ na-asọpụrụ ya na-adị ndụ nkà n'okpuru atọ ndị ọchịchị ikike. Ọ ga-achọkwa ka Òtù Ụmụnna chegharịa echiche ya, ma kwenye na ụfọdụ n'ime ha, na inye ọnụ na arụmụka ọha na eze maka iwu. Mgbochi ndị na-arụ ọrụ n'èzí ụlọ nzukọ dị iche iche nwere ike ikwu okwu ndị na-enweghị olileanya na a ga-arụ ọrụ dịka iwu; ndị dị ugbu a nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-enwe ike ime ezigbo mkpebi na ụwa. Nkewa nkewa n'ime òtù Ụmụnna, n'agbanyeghị nchịkwa ndị ọrụ, abanyewo n'elu ruo ọtụtụ afọ, na-egosi nhekọrịta banyere onyeisi na ụzọ kasị mma isi soro ndị gọọmenti na-emekọrịta ihe; a naghị edozi akụkụ ndị a site na mmiri mmiri Arab ma nwee ike mụbaa dịka nzukọ ahụ na-agba mbọ ịmalite ọrụ ya. N'ime oge a, Òtù Ụmụnna ga-enyocha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa na ụlọ akwụkwọ akụkọ nwere mmasị ịkatọ nzukọ ọ bụla. N'aka nke ya, ogige ndị agha, ogologo oge ike dị n'azụ ọchịchị aka ike, ga-echere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị; ike na-enweghị ibu ọrụ nke ọchịchị yiri ka ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ya, tinyere ịnọgide na-enwe nnukwu ego. N'ikpeazụ, ọganihu nke omume Salafi, nke gosipụtara na ebe nke abụọ na-egosipụta (n'azụ FJP) na ntuli aka nzuko omeiwu, pụtara na Òtù Ụmụnna ga-agbazi ugbu a site n'aka ndị Alakụba na-agbanwe agbanwe. N'okwu na-adọrọ mmasị, ndị Salafis nwere ike ikwe ka Òtù Ụmụnna kwado onwe ha dị ka ike na-enweghị isi na agha obodo ọdịnala nke Ijipt.
Ihe doro anya bụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Alakụba aghọọla ọhụụ ọhụrụ na Egypt, opekata mpe maka ọdịnihu. Thetù Muslimmụnna Muslim ọ ga-abụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ na-azọ ọchịchị? Mkpokọta nke Islamism na isi ihe nwere ike bụrụ ihe ngosi, dịka ụfọdụ ndị ọkammụta na-atụ aro, "ntụgharị post-Islamist" na obodo ndị Alakụba - oge mgbe mmegharị Alakụba agbaghala onwe ha na ọrụ ha na ọha mmadụ nke na ha efunahụla ha dị ka ngwa nke mgbanwe (Bayat 2007). Mụ akwụkwọ nke Islamism na mmegharị mmekọrịta ọha na eze ga na-ele anya ịhụ ihe ọdịnihu ga-eweta. N'ịmara ọnọdụ ya, hoodtù hoodmụnna ga-anwa ịmepụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ na Egypt ma gosipụta ndị nkatọ ya na-ezighi ezi.
Aly, Abd al-Moneim Said na Manfred W. Wenner. 1982. "Nkwaghari nke Islam n'oge a: Òtù Ụmụnna Muslim na Contemporary Egypt." Akwụkwọ akụkọ Middle East Journal 36: 336-61.
Auda, Gehad. 1994. "The 'Normalization' nke Islam Islam na Egypt si 1970s na 1990s." Pp. 374-412 na Nyocha maka Fundamentalisms: Ihe omume nke di omimi, Edited by Martin E. Marty na R. Scott Appleby. Chicago: Mahadum Chicago Press.
al-Banna, Hasan. 1978. Ihe Ise Ise nke Hasan Al-Banna '(1906-1949). Charles Wendell sụgharịrị ma kọwaa ya. Berkeley: Mahadum California Press.
Bayat, Asef. 2007. Ime Islam Democratic: Social mmegharị na Post-IslamistTurn. Stanford: Ụlọ ọrụ University Press.
Fuller, Graham E. 2003. Ọdịnihu nke Islam politics. New York: Palgrave Macmillan.
Kenney, Jeffrey T. 2012. "Millennial Politics in Modern Egypt: Islamism na National Nationalism na Context na Kọntestị." Ọnụ ọgụgụ 59: 427-55.
Kenney, Jeffrey T. 2006. Muslim Rebels: Kharijites na Politics of Extremism in Egypt. Oxford na New York: Oxford University Press.
Kepel, Gilles. 2003. Ịgbaghara Muslim na Egypt: Onye Amụma na Fero. Jon Rothschild sụgharịrị ya. Berkeley na Los Angeles: Mahadum California Press.
Leiken, Robert S. na Steven Brooke. 2007. "Òtù Ụmụnna Muslim nke Na-enweghị Omume." Isi mba 86,2: 107-121.
Lia, Brynjar. 2006. Society nke Muslim Brothers na Egypt: Nbili nke Islam uka Movement 1928-1942. Ịgụ, UK: Ithaca Press.
Mitchell, Richard P. 1969. Society of Muslim Brothers. London: Oxford University Press.
Talhamy, Yvette. 2012. "Òtù Ụmụnna Ala nke Ala Ọzọ Amataghachiri." Middle East Quarterly 19: 33-40.